Waraana Tigraay: Ameerikaa, UK fi Jarmaniin tarkaanfii mootummaa Itoophiyaa cimsuun morman – AMBO TV
Waraana Tigraay: Ameerikaa, UK fi Jarmaniin tarkaanfii mootummaa Itoophiyaa cimsuun morman
1 Oct 2021 1 Oct 2021 AMBO TV
Itoophiyaan qondaaltonni dhaabbilee UN adda addaa keessatti itti gaafatamummaa olaanaan hojjataa jiran torba atattamaan biyyaa akka bahan ajajuunshee gonkumaa fudhatama hin qabu jechuun Ameerikaan, UK fi Jarman balaaleeffattan.
Pirees sekreetariin Waayiti Hawuus Jeen Saakii tarkaanfii mootummaa Itoophiyaa hordofee ibsa kennaniin, tarkaanfii mootummaa Itoophiyaa hineegamne kana mootummaan Ameerikaa cimseeti morma jedhan.
Haaluma walfakkaatuun embaasiwwan UK fi Jarmanii magaalaa Finfinneetti argaman, murtoo mootummaan Itoophiyaa fudhate kun akka isaan yaaddesse himuun, mootummaan tarkaanfii kana irra deebiin akka ilaalu gaafataniiru.
Itoophiyaan hojjattoota dhaabbilee deeggarsa namoomaa torba dhimma keessoo biyyattii keessa galaniiru jechuun sa’aatii 72 jidduutti biyyaa akka bahaniif ajajje.
Ministerri Dhamma Alaa Itoophiyaa akka jedhetti, qondaaltoonni olaanoon biyya gadhiisanii akka bahan murtaa’e, kanneen dhimma keessoo biyyaa keessa seenaniifi ”lammii biyya alaa mirga himatamuu dhabuu qabanidha.”
Dubbi-himtuun Waayit Hawus Itoophiyaan hojjattoonni kunneen biyyasheetii akka bahaniif kan murteessite, erga kaaba biyyattiitti namoonni kumaatamaan lakkaa’aman sababii beelaatiin du’aa jiru jechuun gabaasni akeekkachiisaa erga baheen booda jedhan.
Mootummaan Itoophiyaa dhiyyeessii nyaataa, qorichaa fi kanneen lubbuu oolchuuf gargaaran kan biraa namoota barbaachisuuf akka hin dhiyaanneef danqaa ta’unsaa nu yaaddessee jira jedhan.
”Dhiyeessii deeggarsa namoomaa danquu fi lammii ofii filmaata bu’uuraa dhabsiisuun fudhatama akka hinqabaanne, Mootummoota Gamtomaniitti miseensii mana maree nageenyaa fi hawaasni idil-addunyaa motummaa Itoophiyaatiif ifa akka taasisuuf waamicha dhiyeessina,” jedhan.
Piresi sakreetariin kun dabaluun, Pireezidaant Joo Baayidan namoota waraanni kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamu akka dheeratuuf sababa ta’an irratti qoqqobbiin faayinaansii kaa’uu kan dandeessisuu ajaja mallatteessuun isaanii yaadachiisaniiru.
Qaamolee hojii deeggarsa namoomaa gufachiisan irratti murtee pirezidaantichi dabarsan ta’e, ”filmaata harkaa qabnu kamuu fayyadamuuf duubatti hinjennu,” jedhaniiru.
Biyyoonni kaan hoo maal jedhan?
Haaluma walfakkaatuun mootummaan Itoophiyaa hojjattoota UN biyya hari’uuf tarkaanfii fudhate hordofuun imbaasiiwwan biyyoota garaa garaas yaada kennanii jiru.
Imbaasiin Jarmanii Itoophiyaatti argamu ibsa toora Tiwirata irratti baaseen, akka qama deeggarsa namoomaa guddichaa Itoophiyaatti, ”nutis ari’amuu hojjattoota UN ilaalchisuun yaaddoo Barreessaan olaanaa Mootummoota Gamtomanii (UN) Antooniyoo Guteereez qooddanna,” jedhe.
As one of 🇪🇹 largest humanitarian partners, we share @antonioguterres concern (https://t.co/ebQ77QQMmW) about expulsion of @UNEthiopia staff who are essential to provide lifesaving humanitarian aid to millions of Ethiopians.
🇩🇪 ask @mfaethiopia for expulsions to be reversed.
— German Embassy Addis Ababa (@GerEmbAddis) September 30, 2021
Itti dabaluunis hojjattoonni akka biyyaa bahaniif ajajan kunneen deeggarsa namoomaa murteessaa lubbuu oolchu kan lammiilee Itoophiyaa miliyoonotaaf dhiyeessaniidha jedhe.
Imbaasichi Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa ajaja kana akka kaasuuf waamicha taasiseera.
Imbaasiin UK Itoophiyaatti argamus haaluma walfakkaatuun, tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa hojjattoota dhaabbata gamtomanii sadarkaa itti gaafatamummaa adda addaarratti argaman biyyaa akka bahaniif fudhatee yaadda’uu ibse.
Imbaasichi ”Itoophiyaan biyya rakkoolee namoomaa hedduu keessatti argamtudha. UN ammoo deeggarsa namoomaa ulaagaa duudhaa hojimaataa irratti hundaa’ee dhiyeessuun fedhiiwwan loogii tokko malee kan guutuudha,” jedhe.
Imbaasichi ibsa karaa toora tiwitara isaatiin baaseen, mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii kana haalduree tokko malee atattamaan akka kaasuuf waamicha dhiyeesseera.
Statement on the expulsion of individuals working for the United Nations: pic.twitter.com/tOhElfXt33
— UK in Ethiopia 🇬🇧 (@UKinEthiopia) September 30, 2021
Gama biraatiin ammoo Manni maree Nageenyaa Motummoota Gamtoomanii (UNSC) har’a Onkolooleessa 1 dhimma naannoo Tigraay irratti mari’achuuf akka walgahu himameera.
Walgahii idileen alaa (any other business) jedhamu dhimma Kaaba Itoophiyaa irratti miseensotaan taa’amu kunis kan qaamoolee UN adda addaatiin akka waamame ibsameera.
Previous PostEeyyama darbii ayyana irreechaa
Next PostMORMII QEERROO: IRREECHA FINFINNEE